Gịnị bụ antimatter, olee otu o si arụ ọrụ na gịnị maka ya? Network Meteorology
Mgbe ị nụrụ okwu ahụ antimatter Ọ dị ka ihe a na-ahụkarị n'ihe nkiri. Agbanyeghị, ọ bụ ihe zuru oke ma anyị na-etinye ya na ahụ anyị. Antimatter abụrụla ihe dị mkpa na sayensị ka ọ na-enyere anyị aka ịghọta ọtụtụ akụkụ nke ụwa, mmalite ya na mmalite ya. Na mgbakwunye, ọ na-akọwa ọtụtụ ihe ịtụnanya na-eme n’eziokwu.
Chọrọ ịma ihe antimatter bụ na gịnị kpatara ya ji dị mkpa? N'ebe a, anyị na-akọwara gị ihe niile.
1 Gịnị bụ antimatter
2 Nhazi Dirac
3 Ebee ka achọtara antimatter?
4 Gịnị ka ọ bụ maka
Gịnị bụ antimatter
Antimatter na-ebilite site na otu nnukwu nha anya nke nwere asụsụ nke naanị ndị ọkachamara n'ihe ọmụmụ physics na mgbakọ na mwepụ nwere ike ịkọwapụta. Usoro ndị a dị ka ihe na-ezighi ezi na nke ahụ, mgbe ọtụtụ nhatanha gasịrị, ọ dị njọ na enwere mperi ụfọdụ. O sina dị, nke a bụ eziokwu kpamkpam na antimatter dị adị.
Ọ bụ ihe mejupụtara ihe a maara dịka antiparticles. Ndị ahụ bụ otu ihe ahụ dị ka ndị anyị maara ma na kpamkpam abụghị eletriki ụgwọ. Ọmụmaatụ, antiparticle nke electron onye ụgwọ ya adịghị mma bụ positron. Ọ bụ ihe hà nhata na otu ihe ahụ, mana ejiri ụgwọ ziri ezi. Nke a dị mfe na onye ọ bụla chọrọ ime ka ọ dịkwuo mgbagwoju anya bụ ihe ọjọọ.
Ngwurugwu ndị a na ọgwụ mgbochi na-abanye abụọ. Mgbe ha abụọ dara, ha na-ebibi ibe ha ma pụọ ​​kpamkpam. N'okpuru nsonaazụ a, a na-etolite ọkụ ọkụ. A na-eche na irighiri ihe na-enweghị ebubo, dị ka neutrinos, bụ mpempe akwụkwọ nke ha.
E nwere ụfọdụ chepụtara na-eche banyere ihe ndị a n'okpuru aha Majorana na ọ na - esote na ihe gbara ọchịchịrị nwere ike bụrụ Majorana, nke ahụ bụ ịsị na ha onwe ha bụ ihe mgbochi ya na irighiri ya n'otu oge ahụ.
Dị ka anyị kwurula, antimatter na-esite na ọmụmụ mgbakọ na mwepụ na usoro nha anya ogologo. Physistist Paul Dirac, mụọ ihe a niile na 1930. Ọ gbalịrị ịme ka mmiri dị mkpa dị n'otu n'otu: njikọta pụrụ iche na usoro klọọkụ. Mmiri abụọ a dị n'otu usoro nwere ike inyere aka nghọta nke eluigwe na ala.
Taa, anyị maara nke a dị ka akụkụ Dirac. Nke a bụ usoro dị mfe, mana nke karịrị ndị sayensị niile n'oge ahụ. Na akụkụ ahụ buru amụma ihe yiri ka ọ gaghị ekwe omume, ihe ndị nwere ike na-adịghị mma. Ebumnuche Dirac kwuru na ahụ nwere ike inwe ume karịa izu ike. Nke ahụ bụ, ha nwere ike pere mpe karịa ka ha nwere mgbe ha anaghị eme ihe ọ bụla. Nkwupụta okwu a siiri ndị ọkà mmụta sayensị ike karị. Kedu ka ị ga - esi belata ike karịa gị n'enweghị ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị naghị eme ihe ọ bụla n'onwe gị?
Site na nke a ọ ga-ekwe omume ịchọpụta na ụmụ irighiri ihe nwere ume na-adịghị mma. Ihe a niile kpatara eziokwu nke enwere oke mmiri nke nwere ike na-adịghị mma na nke physics achọpụtabeghị. Mgbe a nkịtị urughuru jumps si ala ike larịị ka elu onye, ​​ọ doo a ọdịiche na ala ike larịị ọ bịara. Ugbu a, ọ bụrụ na mkpụrụ ahụ nwere ụgwọ na-adịghị mma, oghere nwere ike ịnwe oghere na-adịghị mma ma ọ bụ, ihe bụ otu ihe ahụ, ụgwọ dị mma, ya bụ, positron. Nke a bụ otú e si malite echiche nke antiparticle.
Ebee ka achọtara antimatter?
Ihe mbụ antimatter ahụrụ bụ ndị sitere na ụzarị igwe na-eji ụlọ igwe ojii. A na-eji igwefoto ndị a eme ihe iji chọpụta ihe dị iche iche, ha na-ebute gas nke na-eme ka ion ahụ gachara, yabụ ị nwere ike ịmata ụzọ ha nwere. Ọkà mmụta sayensị Carl D. Anderson nwere ike iji ndọta nke mere, Mgbe otu urughuru gafere n'ime ụlọ ahụ, ụzọ ahụ ga-ehulata maka ụgwọ eletriki ya. N'ụzọ dị otú a, ọ na-enweta na urughuru gara otu akụkụ na antiparticle n'akụkụ nke ọzọ.
Ka oge na-aga, a chọpụtara antiproton na antineutrons na, kemgbe ahụ, ihe ndị ahụ achọpụtala nke ukwuu. Antimatter bụ onye amara nke ọma. A na-ekpuchi ụwa anyị mgbe nile na ihe ndị na-emegide akụkụ ya nke bụ akụkụ nke mbara igwe. Ihe kacha dịrị anyị nso bụ ihe na-emetụta anyị.
Anyị nwere ike ịsị na anyị onwe anyị na-ebute antimatter n'ihi ngwakọta nke ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị eri banana, n'ihi ire ere nke potassium -40, ga-eme positron na minit 75 ọ bụla. Nke a pụtara na ọ bụrụ na, n’ime ahụ anyị anyị hụrụ potassium -40, ọ ga-abụ na anyị onwe anyị bụ isi iyi nke antiparticles.
O doro anya na ị ga-ekwu na ọ bụ uru ịmara na enwere antimatter. Ekele, ekele dịrị ya, anyị nwere ọtụtụ mmụba n'ihe banyere ọgwụ. Ọmụmaatụ, a na-ejikarị ya eme ihe na positron emission tomography. A na-eji irighiri ihe ndị a nwee ike ịmepụta ụfọdụ onyonyo nke ahụ mmadụ na mkpebi dị elu. Ihe onyonyo a bara ezigbo uru na nyocha iji mara ma ọ bụrụ na anyị nwere akpụ nke na-agbasa ma ọ bụ ogo nke evolushọn. A na-amụkwa ihe eji antiproton maka ọgwụgwọ ọrịa kansa.
N'ọdịnihu, antimatter nwere ike ịbụ ihe mmezi na mmepụta ume. Mgbe ihe na antimatter kpochapụrụ, ha na-ahapụ ezigbo ụdị ike n'ụdị ọkụ. Otu gram nke antimatter naanị ga-ewepụta ike ya na bọmbụ nuklia. Nke a dị oke egwu.
Nsogbu dị taa na nrigbu nke antimatter maka ike bụ nchekwa ya. Obu ihe anyi n’enweghi ike idozi ya. Gram ọ bụla nke antimatter ọ ga-achọ ihe dị ka puku kilomita 25.000 nke ike kilowatt.
Ọ na-egosipụtakwa ihe mere anyị ji dịrị. Na mbu, dika nnukwu Bang Okwu, mmalite nke ihe abụọ na antimatter ga-abụrịrị site na usoro nke nchịkọta zuru oke. Ọ bụrụ otu a, anyị gaara efu efu. Ya mere, ọ dị mkpa na a ga-enwerịrị opekata mpe 1 karịa ihe ọ bụla maka antimatter ọ bụla.
Enwere m olileanya na ozi a emeela ka obi abụọ gị sie ike banyere antimatter.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Antimatter